﻿ बराहक्षेत्रका तीन वटा विद्यालयमा दुई सय बेडको क्वारेन्टाइन बन्ने
बराहक्षेत्रका तीन वटा विद्यालयमा दुई सय बेडको क्वारेन्टाइन बन्ने
प्रकाशपुर । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले नगरका तीन वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउने भएको छ । आज (बिहिबार) बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले तीन ठाँउमा बनाउन निर्णय गरेको छ ।
बराहक्षेत्र नगरको तीन वटा विद्यालयमा २ सय बेडको क्वारेन्टाइन बनाउन तयारी गरेको वार्ड नंं २ का वडाध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए ।
बराहक्षेत्रको वार्ड नम्बर ३ भरौलमा रहेको महेन्द्र मावि, वार्ड नंं. ६ को महेन्द्र मा.वि, चक्रघट्टी र बराहक्षेत्र १० को प्रकाश मावि प्रकाशपुरमा क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी राजेशप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए । तत्काल वार्ड नं. ६ को महेन्द्र मा.वि, चक्रघट्टीमा बनाउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।
एउटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने छ । क्वारेन्टाइनमा वाइफाइ राखिने देखि सिसिक्यामेरा समेत जडान गरिने भएको वडाध्याक्ष भट्टराईले बताए । नेपालगञ्ज नाकामा रहेका नगर क्षेत्रका बासिन्दालाई ल्याउन नगरले मात्र नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई ल्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको भट्टराईले बताए ।
अरु नाकामा भएका हरुलाई ल्याउन पहल गर्ने र सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सूचना प्रवाह गरी सम्पर्कमा आएकालाई ल्याउने निर्णय भएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई खानाको व्यवस्था नगरले गर्ने र क्वारेन्टाइनको सुरक्षा निकायले गर्ने निर्णय भएको भट्टराईले जानकारी दिए । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आजै तिन वटै क्वारेन्टाइन बनाउने स्थलको स्थलगत निरिक्षण गरेका छन् ।